Madaxweynayaal, ka Quusta in aad ka Quusataan | Hangool News
Madaxweynayaal, ka Quusta in aad ka Quusataan
June 11, 2019 - Written by Hangool News 1
Waa farriin u socota Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada ku shiraya Nairobi.
Mudanayaal, Madaxweynayaal, iga hooya salaan Soomaalinnimo, salaan saaxiitinnimo oo Muqdisho ka timid oo aan khadka idiin soo marinayo.
Waxaan qiyaasayaa Ramadan iyo waddac ka dib in aad quraac wanaagsan qaadateen, qadaduna ay idiin soo carfeyso. Allah ha idiin daaweeyo.
Waan ku kalsoon ahay in aad maanka ku haysaan in aad u maqan tihiin Soomaali qaarkood badani aanuu labada midna haysan.
Walaalayaal waan jeclaa in shirkuunnu uu ku qabsoomo dalka gudihiisa. Waxaan ku kalsoonahay in aad idinkuna sidaa jecleydeen. Ma dhicin. Sababta idinka ayaa iga og.
Waan ogahay Dowladda Federaalku dhaliil, laba iyo ka badanba in ay leedahay.
Ma ahi dadka ku soo baraarugay muranka hadda ka dhashay shidaalka iyo madasha doorasho ee mid ama laba Dowlad Goboleed ku soo fool leh iyo Hannaanka doorashada Federaalka.
Intaa ka horow, waan la socday khilaafka. Waan ogaa in ugu yaraan mid idinka mid ahaa xilka looga tuuray si aan munaasab ahayn. Waan ogahay murashax fursadi u muuqatay in uu xorriyaddiisa ku waayay dembi aan hore loogu eedeyn. Waan ogaa in dhiig Soomaaliyeed iyo mid shisheeyaba uu ku daatay.
Waa ogahay mid kale oo idinka mid ah muddo dheer lagu hayay xasillooni darro siyaasadeed oo, aragtideyda, Federaalku haddaanuu curinteeda lahayn uu ugu yaraan hurinteeda ku lug lahaa.
Khilaafkaas oo markii uu billowday aan ka dhowrsaday iskana diiday in aan ku dhexmilmo, waa tii mar dambe warqad ka soo baxday Wasaarad aan Wasiirkeedu ka raalli ahayn la damcay in lagu kala diro Dowlad Goboleed. Taasi waxay qeyb ahaan sabab u noqotay dhismaha Golihiinna iyo shirkii Kismaayo.
Waan qabaa in dhacdooyinkaas ay Puntland doorashadeedii gayeysiiyeen in ay irdaha ka xirato Mas’uuliyiinta Federaalka inta tabarteed ah. Waa tallaabo aan Soomaali ku farxi karaa jirin, haddana qiil haysata.
Federaalka marka uu ka habaabo waddada, kana xishoon waayo xadgudubka noocaas ah, intii uu jiho khalad ah u xawaareyn lahaa waan qabaa in la joojiyo.
Isla mar ahaantaas, waxaan qabaa in Dowladda lala shaqeeyo.
Waliba hadda oo awood-yari, culeys badan oo gudaha ah iyo culeys ay Dowlado na saareen intuba ay Soomaaliya ku goobteen, waxaan qabaa in aan la wiiqin Dowladda ee garab iyo gaashaan loo noqdo.
Haddana waxaan qabaa in Dowaldda lala xisaabtamo. Waliba si adag. Si la mid ah sida ay iyaduba xaq ugu leedahay in ay idiinla xisaabtanto.
Waxaan qabaa in mooradeenna dhexdeeda lagu xisaabtamo.
Heerka uu khilaafku hadda gaaray iyo xilliga uu ku soo beegmay, midkoodna uma roona hanaqaadka Dowladnimadeenna curdunka ah. Labada midna ma sahlayo kor u qaadidda kalsoonida uu shacabku ku qabo Dowladda aad idinku ka midka tihiin Madaxdeeda.
Ma qabo in khilaafka hadda idiin dhexeeya looga sii daro. Mana qabo in uu sii jiitamo. Waxaan qabaa in aan is arag laga quusan.
Ma qabo in khilaafka looga sii daro, oo caasimado shisheeye loo raro, sababta oo ah ma xammili karno, waana ka soo kornay shir Soomaaliyeed oo ka dhaca dal shisheeye.
Ma qabo in khilaafku uu sii jiitamo, waayo wakhtigu waa warmoog oo kama warqabo khilaafka. Wakhtigu uma hakanayo xalraadin ee sidiisii ayuu u xawaareynayaa kol dhowna wuxuu na geynayaa xilliga doorashada.
Waxaan qabaa in aan is arag laga quusan.
Waxaan qabaa in majliska minankeenna sharafta leh lagu dhex murmo.
Waxaan qabaa in aan Gobol keliya loo fakarin ee heer Qaran loo fekero. Gobol badbaadayaa ma jiro haddaan Qaranku badbaadin. Gobol keligii horumar weyn oo taabba-gal ah sameyn karaana ma jiro.